OEM Nero Adjustable Bamboo Drawer abahluli Umenzi kunye Factory | Nero
Ubunzima: malunga ne-1.3kg
Ubungakanani : 56 x 1.5 x 6; 43 x 1.5 x 6 cm ( L x W x H)
Izahluli ezi-4 zedrowa ze-bamboo ezilungelelanisiweyo, iipads eziyi-9 ze-bamboo.
IMIDLALO ELUNGISELWEYO: Thatha umbutho wakho uwuse kwiindawo eziphakamileyo kunye nezahluli zedrowa ze-bamboo ze-Nero. Jongana nobumdaka obumalunga nendlu ekhitshini lakho, kwigumbi lokulala, nakwigumbi lokuhlambela ngale seti yomququzeleli wedrowa yoqalo. Yenzelwe ukugcina iidrowa zakho zokugcina zicwangciswe kakuhle ukuze ufumane into oyifunayo, xa uyifuna. Qiniseka ukuba ulinganisa kwaye uthelekise imilinganiselo yedrowa yakho phambi kokuba uyithenge ukuze isetyenziswe ngokugqibeleleyo
I-MULTIPURPOSE DRAWER DIVIDER INSERTS - Iseti yethu yomququzeleli wedrowa yasekhitshini ifanelekile kwiidrowa eziyi-17”-22”. Ziyaziwa kwaye zithandwa ngenxa yoyilo lwazo oluguquguqukayo, zisebenza kakuhle njengezahluli zedrowa zempahla, abaququzeleli bobugcisa kunye neeseti zokugcina, nanjengabahluli bedrowa. Uyilo lwayo oluhlengahlengiswayo lukuvumela ukuba uhlele uyilo lwedrowa yakho nokuba ngumququzeleli wempahla yangaphantsi yesiko ukubamba bonke abathunywa bakho ngobunono.
UKWANDISA UKUFANELEKA KWE-CUSTOM FIT - Iseti yethu yomququzeleli wedrowa enzulu iza kunye nezahluli ezi-4 ezilungelelanisiweyo zedrowa, nganye inomlinganiselo we-22 "x 2.3". Yenzelwe ukuba wenze uninzi lwegumbi lomntwana wakho okanye indawo yeofisi kwaye wandise umthamo wedrowa yakho. Thatha ithuba lofakelo lwethu olwandiswayo lwezahluli zedrowa kwaye wenze ngokwezifiso idrowa nganye ngendlela othanda ngayo ukuze ilingane
UMBUTHO NGOKUPHELELEYO-Ukulungisa ikhaya lakho akufuneki kube yindleko yeedrowa zakho! Yiyo loo nto izahluli zethu zedrowa ye-bamboo ziza kunye ne-eva foam padding eyakhelwe-ngaphakathi eziphelweni ukuze zigcinwe ngokuqinileyo kwindawo. Oku kuthintela umququzeleli wethu wezahluli zedrowa ukuba angakrazuli iidrowa zakho kwaye enze nawuphi na umonakalo. Eyona nto ifanelekileyo ekhitshini njengezahluli zedrowa zezixhobo ezinkulu ezinje ngeeladi, iispatula, nokunye.
USER UBUHLOBO-Sikholelwa ukuba uyakuxabisa izahluli zethu zedrowa ezomeleleyo kunye noyilo oluthe ngqo. Umququzeleli wethu wetreyi wenziwa ukuze ukwazi ukwenza uninzi lwaso nasiphi na isithuba sedrowa!
Ngaphambili: Nero bamboo ziplock umququzeleli yokugcina ingxowa
Okulandelayo: I-Bamboo Eyandiswayo Yedrowa yoMququzeleli yoMphathi weZixhobo